Gastroparesis And Gastric Motility Disorders (အစာချေချိန် ကြာမြင့်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Gastroparesis And Gastric Motility Disorders (အစာချေချိန် ကြာမြင့်ခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Gastroparesis And Gastric Motility Disorders (အစာချေချိန် ကြာမြင့်ခြင်း)
Gastroparesis And Gastric Motility Disorders (အစာချေချိန် ကြာမြင့်ခြင်း) ကဘာလဲ။
ရေးသားသူ Dr. Kaung Thar ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. K Zin Thwe
Gastroparesis (delayed gastric emptying) အစာချေချိန် ကြာမြင့်ခြင်း ဆိုတာ အစာအိမ်ထဲမှာ အစာတွေဟာ ပုံမှန်ရှိနေရမဲ့ အချိန်ထက် ပိုကြာပြီးရှိနေတဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အစာတွေကို အစာချေလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ အာရုံကြောတွေ ထိခိုက်ပြီး ကြွက်သားတေါကလဲ ပုံမှန်လို အလုပ်မလုပ်နိုင်ခြင်းတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ်အားဖြင့် အစာတွေဟာ မကြေတော့ပဲ အစာအိမ်ထဲမှာ ကျန်နေကြပါတယ်။
Gastroparesis And Gastric Motility Disorders (အစာချေချိန် ကြာမြင့်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
Gastroparesis (အစာချေချိန် ကြာမြင့်ခြင်း) ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။
gastroparesis ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
သွေးတွင်း သကြားဓါတ်အား ထိန်းချုပ်ရခက်ခြင်း
gastroparesis လက္ခဏာတွေဟာ vagus nerve ထိခိုက်မှုအပေါ်မူတည်ပြီး သေးသေးကနေ ကြီးကြီးမားမားထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လက္ခဏာတွေဟာ ချေဖြတ်ရခက်တဲ့ အမျှင် များတဲ့ အစားအစာ သို့ အဆီများတဲ့ အစားအစာတွေ စားပြီးနောက်မှာ ပိုဆိုးလာတတ်ပါတယ်။
Gastroparesis အစာချေချိန် ကြာမြင့်ခြင်း ဟာ ခန္ဓါကိုယ် အပေါ်ဘယ်လို သက်ရောက်မှု ရှိသလဲ?
အစာဟာ ဝမ်းဗိုက်အတွင်း ပုံမှန် မချေဖျက်နိုင်ပဲ ရှိနေတာကြောင့် အစာအိမ်အချဉ်ဖောက်ကာ ဘက်တီးရီးယားတွေ ပေါက်ပွားလာနိုင်ပါတယ်။ မချေဖက်နိုင်တဲ့ အစာတွေဟာ bezoars လို့ခေါ်တဲ့ အစိုင်အခဲတွေစြဖ်လာပြီး ပျို့ခြင်း၊အန်ခြင်း နှင့် အူလမ်းကြောင်းပိတ်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
Gastroparesis ကြောင့် အစာချေဖျက်နိုင်မှု နှေးပြီး သွေးတွင်း သကြားဓါတ်ကို ထိန်းချုပ်ရခက်တာကြောင့် ဆီးချိုသွေးချို ပြသနာတွေ ပိုဆိုးလာစေပါတယ်။ အစာချေဖျက်မှုခက်ခဲခြင်းကြောင့် ဆီးချိုသမားတွေမှာ သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကို တိုင်းတဲ့ အခါမှာ အလွန်မြင့်မား သို့ အလွန်နည်းနေခြင်းတွေသာ တွေ့ရသောကြောင့် ထိန်းချုပ်ရန်ခက်ခဲလာပါတော့တယ်။ အကယ်လို့ သင့်မှာ သကြားဓါတ်လွန်ကဲနေလျှင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြပါ။ တခြားလက္ခဏာတွေရှိလျှင်လည်း ပြောပြပါ။
Gastrparesis ဆိုတာ နာတာရှည်ရောဂါဖြစ်ပါတယ် ပြီးတော့ ဒီရောဂါရှိနေတာဟာ သင့်အပေါ်လွှမ်းမိုးနေသလို ခ့စားရပါလိမ့်မယ်။ နေမကောင်းဖြစ်နေစဉ် အစားရှောင်ရတာတွေ နှင့် သွေးတွင်း သကြားထိန်းရတာတွေ၊ ပျို့အန်ခြင်းတွေဟာ ပင်ပန်းပါတယ်။ ထို့ကြောင့် gastroparesis ရှိတဲ့ လူနာတွေဟာ စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်ရပြီး စိတ်ဓါတ်ကျနေတတ်ပါတယ်။
Gastroparesis And Gastric Motility Disorders (အစာချေချိန် ကြာမြင့်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
Gastroparesis ရှိတဲ့ လူနာတွေမှာ အစာချေလမ်းကြောင်းအပါအဝင် ဝမ်းဗိုက်အင်္ဂါတွေ နဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ ဆက်စပ်ပေးတဲ့ အာရုံကြောရှည်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ vagus (ဗေးဂက်စ်) အာရုံကြောပျက်စီးမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အာရုံကြောပျက်စီးခြင်း မှာ vagus အာရုံကြောပျက်စီးမှုကြောင့် အစာချေမှုကို ထိခိုက်စေပြီး အစာကိုချေဖျက်စေတဲ့ အာရုံကြော လှုံ့ဆော်မှုတွေဟာ နှေးကုန် သို့ ရပ်ကုန်ကြပါတယ်။Gastroparesis ကို ရောဂါအဖြေရှာရ ခက်တဲ့အပြင် လူနာတော်တော်များများမှာ မသိလိုက်တာတွေ ခဏခဏဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် gastroparesis ကို ဆီးချိုသမားတွေမှာ ၅ ရာခိုင်နှုန်း ကနေ ၆၅ရာခိုင်နှုန်း သာတွေ့ရျိကြောင်း လေ့လာမှုတွေအရ သိရပါတယ်။
Gastroparesis (အစာချေချိန် ကြာမြင့်ခြင်း) ဟာ သွေးတွင်း သကြားဓါတ်မြင့်မားမှု ကို နှစ်ပေါင်းများစွာထိန်းချုပ်နိုင်မှု မရှိတဲ့ ဆီးချိုသမားတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ သွေးတွင်းသကြာဓါတ်မြင့်မားမှု ကြာမြင့်ချိန်ကြောင့် ခန္ဓါကိုယ် အနှံ့ အာရုံကြောတွေမှာ ဓါတုပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ သွေးတွင်း သကြားဓါတ်ဆက်တိုက်များနေခြင်းကြောင့် ခန္ဓါကိုယ်အနှံ့မှာရှိတဲ့ vagus (ဗေးဂက်စ်) အာရုံကြော အပါအဝင် တခြား အာရုံကြောတွေကို သွေးနဲ့ အောက်ဆီဂျင်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ သွေးကြာတွေ ထိခိုက်ရာကနေ gastroparesis ကိုဖြစ်စေပါတယ်။
Gastrparesis ဟာ အဆင့်ဆင့်ဖြစ်တဲ့ ရောဂါဖြစ်တာရယ်၊ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ လက္ခဏာတွေက နာတာရှည် နလုံးအောင့်ခြင်း၊ ပျို့ခြင်းတို့ အဖြစ်များတာကြောင့် ဒီရောဂါရျိနေမှန်း သိချင်မှ သိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ငါ့ဆီမှာ Gastroparesis And Gastric Motility Disorders (အစာချေချိန် ကြာမြင့်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အမျိုးသမီး ဆီးချိုသမားတွေမှာ ဖြစ်ပွားနိုင်မှု ပိုမြင့်မားပါတယ်။ အရင်က ဗိုက်ခွဲဖူးတာတွေနဲ့ အစားမမှန်တာတွေကြောင့်လဲ ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆီးချိုမဟုတ်ပဲ တခြား ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါတွေ၊ အစာကြေနှေးစေတဲ့ဆေးတွေ၊အက်ဆစ်ပြန်တက်ခြင်းရောဂါတွေ နှင့် ချောမွေ့ကြွက်သားမကောင်းတာတွေကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ gastroparesis လက္ခဏာတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ တခြားရောဂါတွေကတော့ ပါကင်ဆန် ရောဂါ၊ နာတာရျည် မုန့်ချိုအိတ်ရောင်ခြင်း၊ကျောက်ကပ်ရောဂါ နဲ့ Turner’s syndrome တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ တခါတရံမှာ gastroparesis ဟာ စမ်းသပ်မှုများစွာလုပ်သော်လည်း ဖြစ်ပွားမှုဇစ်မြစ်ကို မသိနိုင်ပါ။
Gastroparesis And Gastric Motility Disorders (အစာချေချိန် ကြာမြင့်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
Gastroparesis And Gastric Motility Disorders (အစာချေချိန် ကြာမြင့်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
Gastroparesis ရှိနေလျှင် အစာကြမ်းတွေ၊ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊လိမ္မော်သီး၊နို့နှင့် နို့ထွက် ပစ္စည်းများ၊ရေခဲမုန့်နဲ့ gas ပါတဲ့ ဖျော်ရည်တွေ မစားသောက်သင့်ပါဘူး။ ဆရာဝန်တွေက အစာနည်းနည်းနဲ့ သေချာကျိတ်ထားတဲ့ အစာတွေကို စားဖို့တိုက်တွန်းပါလိမ့်မယ်။ သင့်ကိုယ်သင် ရေဓါတ်မဆုံးရှုံးပါစေနဲ့ အထူးသဖြင့် အန်သည့် လက္ခဏာခံစားနေရလျှင်။
Gastroparesis ကို ပျောက်အောင် ကုနိုင်တဲ့ ကုထုံးရယ်လို့ မရှိပါ။ ၎င်းဟာ နာတာရှည်ရောဂါဖြစ်တဲ့ အတွက် အစားဆင်ခြင်ခြင်း၊ဆေးသောက်ခြင်း၊ သကြားဓါတ်ထိန်းခြင်း၊ အင်ဆူလင် မှီခိုရသော ဆီးချိုအမျိုးအစား (၂) ဆိုလျှင် အင်ဆူလင် လုံလောက်စွာထိုးခြင်းဖြင့် စီမံကုသလို့ရပါတယ်။ အလွန်ဆိုးရွားသော အခြေအနေတွေမှာတော့ ဆရာဝန်က အရည်ပဲ ပြောင်းသောက်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။
အစာအိမ်ကို လျှပ်စစ်လှိုင်းနဲ့လှုံ့ဆော်ခြင်း ဆိုတာကတော့ အစာအိမ်ထဲမှာ ခွဲစိပ်ပြီး လျှပ်စစ်ကိရိယာလေးတစ်ခုထည့်ထားတာပါ။၎င်း ကိရိယာလေးဟာ အစာအိမ်အောက်ပိုင်း ချော့မွေ့ကြွက်သားတွေနဲ့ အာရုံကြောတွေကို လျှပ်စစ်လှုံ့ဆော်မှုလေးတွေ ပေးပြီး gastroparesis ရဲ့ ပျို့ခြင်း အန်ခြင်းတွေကို လျော့နည်းစေပါတယ်။
အဆိုးဆုံး အခြေအနေတွေမှာ ဆိုလျှင် နာတာ၇ျည် gastroparesis လူနာတွေမှာ အစာပိုက်တွေသုံးခြင်း နှင့် အရည်သာတိုက်ကျွေးခြင်းဖြင့်သာ အာဟာရပေးရပါတယ်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 20, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 20, 2018
Gastroparesis. http://www.healthfrom.com/Disease/view-494.html. Accessed Mar12, 2017.
Gastroparesis in Women That Just Don’t Gain Weight Eating.
http://slism.com/diet/gastroparesis -symptoms.html. Accessed Mar 12, 2017.
Gastroparesis. http://herbpathy.com/Herbal-Treatment- for-Gastroparesis -Cid5073. Accessed Mar 12, 2017.
What Is Gastroparesis? http://www.webmd.com/digestive-disorders/digestive-disorders-gastroparesis#1- 2. Accessed Mar 12, 2017.
Gastroparesis. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/gastroparesis/basics/definition/con-20023971. Accessed Mar 12, 2017.
Accessed Mar 12, 2017.
Basic Dietary Guidelines. http://www.aboutgastroparesis.org/dietary-lifestyle-measures/basic-dietary- guidelines.html. Accessed Mar 12, 2017.Gastroparesis.
ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်စီးခြင်းကြောင့် ရလာနိုင်သည့် ဆိုးကျိုး ၅ခု
Hyperthyroidism (သိုင်းရွိုက် ဟော်မုန်းများသော ရောဂါ)